भैँसी दुहुदै सुन्दरी, हेर्नुहोस पानीमै आगो लगाउने बोल्ड अवतार ! तस्विरले निकै भाइरल - Mitho Khabar
April 25, 2020 mithokhabarLeaveaComment on भैँसी दुहुदै सुन्दरी, हेर्नुहोस पानीमै आगो लगाउने बोल्ड अवतार ! तस्विरले निकै भाइरल
बलिउडमा पुनम पाण्डेलाई समेत टक्कर दिन सक्ने शर्लिन चोपडाका केही तस्विहरु सामाजिक सञ्जालमा खुबै भाइरल हुँदैछन् ।मान्छेहरु सामान्यतः उनलाई मोना चोपडाको रूपमा पनि चिन्ने गर्छन ।
उनका आर्कषक तस्विरका कारण चर्चामा रहने गर्छिन । अहिले पनि उनको भैंसीसँगको तस्विरले निकै भाइरल चोपडाको जन्म हैदराबादमा भएको थियो । उनीले स्टेनले गर्ल्स हाई स्कूल र सेंट एन्न कलेज फर वूमेन, सिकन्दराबादबाट शिक्षा प्राप्त गरिन् । चोपडाले बलिउडमा केहि छोटा अभिनयहरूको साथमा अभिनयको शुरूआत गरिन् । उनी टाईम पास, रेड स्वस्तिक र गेम जस्ता चलचित्रहरूमा देखीएकी छिन् ।
उनको तेलुगू चलचित्रहरूमा पदार्पण ए फिल्म बाय अरविन्दबाट भयो। चोपडाले बिग बोसमा पनि भाग लिएकी थिइन् । उनी अक्सर उनका आर्कषक तस्विरका कारण चर्चामा रहने गर्छिन । अहिले पनि उनको भैंसीसँगको तस्विरले निकै भाइरल नै बने । हामीले उनका केहि सुन्दर तस्बिर इन्स्टाग्रामबाट लिएका हौं ।